खाँचो नयाँ शक्तिको | नयाँ शक्ति नेपाल
खाँचो नयाँ शक्तिको
फाल्गुन २५, २०७०
पहिलो संविधानसभा राजनीतिक शक्तिहरूबीचको वैचारिक द्वन्द्वका कारण विफल भयो । जनतासामु गएर प्रतिस्पर्धा गर्नु र जनादेश लिएर संविधान बनाउनु संविधानसभाको मूल ध्येय हो । संविधान बनाउने भनेको मूल कानुन वा राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने पनि हो । समाजमा विद्यमान विभिन्न शक्ति र वर्गको अधिकार बाँडफाँट गर्ने पनि हो । तर, यस महत्वपूर्ण कार्यमा ती शक्तिबीच समन्वय हुनै सकेन । किन त ? यो प्रश्नमा घोत्लिनु अहिले सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
यस्ता विषयमा घोत्लिँदा मुख्य रूपमा विश्व दृष्टिकोणका कुरा आउँछन् । कुन दृष्टिकोणबाट हामीले संसारलाई हेर्छौं भन्ने । यसका फरक–फरक निष्कर्ष वा व्याख्या हुन सक्छन् । तर, मोटामोटी रूपमा दुइटा व्याख्या र बहस हुनेछन् । एउटा नवउदारवादी चिन्तन, जसले व्यक्ति र निजत्वलाई प्रधान मान्छ । अर्को माक्र्सवादी वा समाजवादी दृष्टिकोण, जसले सामूहिकता वा समाजलाई प्रधान मान्छ र व्यक्तिलाई सहायक । यी दुई दृष्टिकोणबीच राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति, सौन्दर्यशास्त्र सबै क्षेत्रमा बहस र प्रतिस्पर्धा पनि छ । पहिलो संविधानसभा विफलतामा टुंगिनुको मूल कारण यिनै दुई दृष्टिकोणको द्वन्द्व थियो । दुइटैले दुईतिर तान्न खोज्दा संविधान बनेन ।
अहिले पनि राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई पहिचान गर्न नसकेर पार्टी–पार्टीका आ–आफ्ना संकीर्ण सोच, व्यक्ति–व्यक्तिका महत्वाकांक्षा र अहम्हरू टकराएर मुलुक नै दिशाहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ । त्यसैले पहिले हामीले राजनीतिक विचारलाई नै नयाँ ढंगले विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका निम्ति वैचारिक र दार्शनिक ढंगले नवउदारवादी र समाजवादी दुइटै विचारको बीचबाट अहिलेको आवश्यकता सुहाउँदो विचारको निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नवउदारवादी दृष्टिकोणले समग्र विश्व र हाम्रो समाजलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन । त्यसले समस्या हल गर्न पनि सक्दैन । त्यसका आफ्नै सीमा छन् र सकारात्मक पक्ष पनि । दुई–तीन सय वर्षदेखि यो विचारले विश्वमा जबरजस्त प्रभाव पार्दै आएको छ । यसले व्यक्तिको निजत्वको महत्व र प्रभावलाई स्थापित गरेको छ ।
निजत्वलाई भन्दा सामाजिकतालाई प्रधानता दिने अर्को माक्र्सवादी दृष्टिकोण छ, जसले २०औँ शताब्दीमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो । कतिपय समाजवादी व्यवस्थाको प्रयोग गर्न पनि खोज्यो । तर, त्यसले व्यक्तिको निजत्वलाई समेट्न सकेन । मान्छेका कतिपय सार्वभौम, प्राकृतिक, स्वभावजन्य गुण हुन्छन् । चरित्र र विविधता हुन्छन् । तिनलाई समेट्न सकेन । अमूर्त सामाजिकताको कुरा मात्रै गर्‍यो । अमूर्त ढंगले सबैलाई सोलोडोलो एउटै बनाउन खोज्यो । त्यसैले २०औँ शताब्दीको समाजवादी प्रयोग सफलतामा पुग्न सकेन ।
अर्कोपट्टि, निजत्वलाई नै सबथोक भन्ने, समग्र समाजको हितलाई भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ र लोभजन्य प्रवृत्तिलाई मात्रै प्रधानता दिने कुराले समाजमा भयंकर द्वन्द्व पैदा गर्‍यो । असमानता र विभेदले पैदा हुने द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन । ठूला विश्वयुद्ध भए ।
अब नयाँ राजनीतिक विमर्श गर्दा यी दुईथरी दृष्टिकोणभित्र रहेका कमीकमजोरीलाई बुझ्नु र तिनका सकारात्मक पक्षहरूलाई समेट्नु आवश्यक छ । खासमा यी दुई विपरित विचार होइनन्, जसरी रूख र जंगल अलग होइनन् । कसैले रूख मात्रै देख्ने, जंगल नदेख्ने, कसैले जंगल मात्रै देख्ने, रूख नदेख्ने । यो प्रवृत्ति नवउदारवादी र समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूका बीचमा रह्यो । त्यसैले बिलकुल विपरित विचारहरूको समन्वय नभएर यी दुवैको अपूर्णतालाई अन्त्य गरी नयाँ विचारको विकास गर्नुपर्छ ।
यसलाई ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । किनभने, समाज विकासको चरण अनुसार विचारको पनि विकास हुन्छ । जस्तो, युरोप र अमेरिका पुँजीवादी युग वा आधुनिक औद्योगिकीकरणको युगको उच्च तहमा पुगिसके । उनीहरू निजत्वमा बढी जोड दिएर अगाडि बढिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि उत्पादनको प्रकृति र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सामूहिकता जन्माइरहेछ । उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुँदै जाँदा व्यक्तिले मात्रै त्यसलाई सम्हाल्न सक्दैन । त्यसमा सामूहिकता जरुरी हुन्छ । यसलाई अनुभूत गरेर नवउदारवादी वा उदारवादी अर्थतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाका कतिपय अवयवलाई समावेश गर्न थालिएको छ । खास गरी स्क्यान्डेभियन मुलुकहरू समाजवादतिर उन्मुख भएका छन् ।
अर्कोतिर, पुँजीवादको माथिल्लो चरणमा नपुगेका र निकै पिछडिएका चीन, कोरिया, भियतनामलगायत एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा समाजवादको प्रयोग गर्न खोजियो । पुँजीवादकै आधार नभएको, विज्ञान प्रविधिको विकास नभएको अवस्थामा एकैचोटि उन्नत समाजवाद स्थापना गर्न खोज्दा त्यो असाध्यै यान्त्रिक र भद्दा खालको भयो । त्यसले विकृत, असाध्यै केन्द्रिकृत, नोकरशाही, निरंकुश र ढोका बन्दवादी प्रकारको समाज सिर्जना गर्न खोज्यो । यो प्रयोग सफल भएन ।
पुँजीवादी युगमा प्रवेश
२००७ सालदेखि २०७० सालसम्म हामीले सामन्ती राज्यव्यवस्था, निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आयौँ । चाहे २००७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको संघर्ष होस् वा २०५० को दशकसम्म वामपन्थी शक्ति बढेर उनीहरूले प्रभाव जमाएका बेला । चाहे २०५२ सालपछि माओवादीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र जनयुद्ध होस् वा मधेसी र जनजातिका क्षेत्रीय र जातीय संघर्ष । यी सबैको योगफलस्वरूप सामन्तवादको अन्त्य गरेर पुँजीवादी क्रान्ति मूलत: सम्पन्न गर्‍यौँ । पुरानो सामन्ती युगको अन्त्य गरेर अब औद्योगिक पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेका छौँ ।
हुन त हामी माओवादीकै नेतृत्वमा यो ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भयो । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा निकै खस्किन पुग्यौँ । त्यसैले यो कस्तो खालको क्रान्ति हो भन्ने पनि पर्न सक्छ । तर, रुसको फेब्रुअरी पुँजीवादी क्रान्ति पनि लेनिन वा बोल्सेभिकहरूको नेतृत्वमा भएको थिएन । इतिहासमा देखिन्छ, कसैले चाहेर मात्रै सबै कुरा हुँदैन । ऐतिहासिक वस्तुगत प्रक्रिया र हामी सबैको आत्मगत प्रयत्नको योगफलस्वरूप नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति मूलत: सम्पन्न भइसकेको छ । केही काम मात्र बाँकी छन् । जस्तो : राज्यको माथिल्लो संरचनामा पुँजीवादी रूपान्तरण भए पनि आर्थिक आधारहरूको जगमा अहिले पनि पुँजीवादपूर्वका सामन्तवादी अवशेष छन् । कतिपय भूमि सम्बन्ध, आर्थिक विकासको मन्द अवस्था, सांस्कृतिक रूपमा लैंगिक र जातिगत विभेद आदि सामन्तवादी अवशेष हुन् ।
राज्यको माथिल्लो संरचना पुँजीवादीकरण भइसकेपछि पुँजीवादको आधारलाई विस्तारित गरेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । यसरी तत्काल राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासलाई जोड दिनुपर्छ । अन्तत: परिमार्जित समाजवादतिर जाने रणनीति अपनाउनुपर्छ । यही कुरामा प्रस्ट नहुँदा धेरै नीतिगत विचलन आउन सक्छन् । हामी माओवादीले पछिल्लो चरणमा पुरानो सामन्तवादी राज्यसत्तालाई धक्का दियौँ । त्यसले पुँजीवादी क्रान्तिलाई सापेक्ष पूर्णतामा पुर्‍याउन मद्दत गर्‍यो । विडम्बना, हाम्रै नेतृत्वमा क्रान्ति पूरा भएर पनि नयाँ संविधान निर्माण गरी अगाडि बढ्ने जुन अवसर थियो, त्यो हामीले गुमायौँ ।
अनुभवको कमी र विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेलका कारण हामीले पहिलो संविधानसभाबाट आफ्नै नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ । तर, पुँजीवादी क्रान्तिका मूलभूत मुद्दाहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र आदि मुलुकमा यसरी स्थापित भए, त्यसबाट त कोही पनि पछाडि हट्न सक्दैन । कोइलीले कागको गुँडमा फुल पार्छ । कागले कोरल्छ । बचेरा हुर्काउँछ । बचेरा ठूला भएपछि कोइली भएर भुर्र उड्छन् । हामीले पनि पुँजीवादी क्रान्तिका भु्रणका रूपमा यी उपलब्धी निर्माण गर्‍यौँ । तर, यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा पुराना संसदीय दललाई दिएका छौँ । उनीहरूको गुँडमा गणतन्त्र र संघीयताको फुल पारेर छोडिदिएका छौँ । र, उनीहरूले नचाहेर पनि कोइलीरूपी त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बच्चा हुर्कन्छ । त्यस अर्थमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ।
अब हामीले केमा ध्यान दिने त ? यो पुँजीवाद पुरानो ढर्राको शास्त्रीय पुँजीवाद होइन । शास्त्रीय पुँजीवाद युरोप, अमेरिकामा थियो, जतिखेर उनीहरूको विदेशमा ठूलो उपनिवेश थियो । त्यहाँबाट उनीहरूले धेरै प्राकृतिक साधन, स्रोत र श्रम भित्रयाउँथे । आफ्नो उपनिवेशमै लगेर उत्पादन बेच्थे । त्यसबाट प्राप्त मुनाफाबाट एक ढंगको पुँजीवादको विकास गरेका थिए । तर, त्यस ढाँचाको पुँजीवादको विकास गर्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामी आफैँ कमजोर छौँ, अर्काको दबाबमा छौँ । त्यसैले हाम्रै विशेषतासहितको पुँजीवादलाई कसरी समृद्ध पार्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यहीँनेर एउटा मौलिक बाटो खोज्नु आवश्यक छ ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको इतिहासको यो विकासक्रमलाई बुझ्न जरुरी छ । २००७ सालयताको संघर्ष पुरानो सामन्ती संरचना भत्काउने आन्दोलन थियो । त्यसैले त्यो विद्रोहात्मक र हिंसात्मक पनि थियो । अब पुरानो भत्काउने चरण करिब करिब पूरा भयो र नयाँ निर्माण गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ । अब नयाँ विचारलाई एउटा नयाँ उचाइबाट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व भनेको समाजलाई विचार दिने र डोर्‍याउने पनि हो । समाजले नयाँ विचारको माग गर्छ र त्यो विचार अनुसारको संगठित शक्ति पनि । संगठित शक्तिबिना राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । पार्टीहरूको भूमिका त्यहाँनेर रहन्छ । त्यसकारण अब नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको प्रसंग पनि आउँछ ।
नयाँ शक्ति निर्माण गर्दा नयाँ ढंगको नेतृत्व पनि चाहिन्छ । गतिशील समाजको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गतिशील नेतृत्व । त्यस हिसाबले के देखिँदै छ भने नेपालमा नयाँ ढंगको विचारको प्रवाह सँगसँगै नयाँ नेतृत्व र नयाँ खालको आन्दोलनको चरणमा हामी प्रवेश गर्दै छौँ । र, त्यसले समग्र नयाँ धु्रवीकरणको माग गरेको छ । यसैलाई केन्द्रमा राखेर अबको एउटा राष्ट्रिय बहस अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका निम्ति संविधानसभा बहसको थलो हुन सक्छ । सडकबाट गर्ने काम त हिजो पनि गरिएको छ र भोलि पनि गर्नुपर्छ । संविधानसभालाई बल पुग्ने गरी विभिन्न वर्ग, समूह, क्षेत्रका आन्दोलन र आवाजहरू अहिले पनि मुखरित हुन्छन्, चाहे पनि नचाहे पनि । जनप्रतिनिधिमूलक थलो हामीलाई प्राप्त छ भने त्यहीँबाट बहस अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
नयाँ शक्ति : कस्तो ?
नयाँ शक्ति निर्माणपहिले विचारमा एकरूपता आवश्यक छ । एकपटक हामीकहाँ विद्यमान राजनीतिक शक्तिलाई हेरौँ । पुरानो संसद्वादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले २००७ सालेदेखि नै पुँजीवादी नीतिको अगुवाइ गर्दै आयो, नवउदारवादी विचारको पक्षपोषण गर्दै । उसले प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुरा पनि नगर्ने होइन । तर, बीपी कोइरालाले जुन ढंगले प्रारम्भिक अवस्थामा ५० र ६० को दशकमा वैचारिक राजनीतिक आधार कांग्रेसलाई दिए, त्यसपछिका नेताहरूले त्यसलाई गति दिन सकेनन् । समाजको गति अनुसार विचार पनि परिवर्तनशील र गतिशील हुनुपर्‍थ्यो, भएन ।
यता वामपन्थी कित्तामा वैचारिक रूपमा ठूलो बहस छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, रुस र चीनको बाटोको विषयमा पनि बहस भए । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी यस्तै बहसले टुटफुट भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि एउटा एमालेको धार र अर्को माओवादी धारमा पुग्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलन । अरू सानातिना शक्ति पनि छन् । तर, यहाँनिर वैचारिक संकट छ । एउटा धारले पुरानो माक्र्सवादी–लेनिनवादी विश्व दृष्टिकोणलाई नै परित्याग गरेर विचारविहीन हुन खोजेको छ । अर्कोचाहिँ एकदमै यान्त्रिक रूपमा त्यसलाई पक्रन खोजेको तर समयानुकूल विकास र परिमार्जन गरेर अघि बढ्न नसकेको वैचारिक अस्पष्टताको विन्दूमा छ ।
यी दुइटै विचारका सकारात्मक पक्षहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ समुन्नत विचार र त्यसका आधारमा नयाँ शक्तिको निर्माण आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । पुँजीवादी क्रान्तिका प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति गर्दै विकसित समाजवादतिर अगाडि बढ्न नयाँ शक्तिको निर्माण र त्यसको जन्म यतिखेरको आवश्यकता हो । तर, त्यो पनि सधैँ स्थिर त हुँदैन । समय–समयमा परिमार्जन र विकास गर्नैपर्छ । केही दशकपछि अर्को विचार र शक्ति निर्माण गरेर जानुपर्ने हुन सक्छ ।
कसको नेतृत्व ?
मान्छेहरू व्यक्ति हेर्छन् । नयाँ शक्तिको निर्माण कसले गर्छ, कसको वरिपरि त्यो बन्छ भन्न थाल्छन् । तर, यो मुख्य कुरा होइन । इतिहासको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा प्रमुख हो । समाज र इतिहासको विकासले के आवश्यकता महसुस गर्छ र कसलाई उपयुक्त ठहर्‍याउँछ भन्ने हो । इतिहासको माग र आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता कससँग छ भन्ने आधारले व्यक्ति अगाडि आउने हो । युरोपमा भन्ने गरिन्छ, जतिबेला सामन्तवादको पूरै अन्त्य र पुँजीवादको विकास गरेर औद्योगिक क्रान्ति आवश्यक भएको थियो, त्यसका निम्ति पूरै राजतन्त्रात्मक सामन्तवादलाई नष्ट गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला नेपोलियनजस्ता बलिया शासकको माग भएको थियो, पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्नका निम्ति । जसरी नेपोलियनको युद्धले युरोपको पूरै राजतन्त्रलाई बढारिदियो र औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार पारिदियो, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । त्यतिबेला ती नेपोलियन नजन्मिएका भए अर्को कुनै नाममा नेपोलियन जन्मिन्थे ।
नेपालमा पनि १८औँ शताब्दीमा बाइसे–चौबीसे भुरे–टाकुरे राज्यहरू थिए । त्यसले भौगोलिक एकीकरणको माग गरेको थियो । त्यो नगरेको भए यो हिमाली भूखण्ड पूरै अंग्रेज उपनिवेशमा मिसिने खतरा थियो । यसलाई एकीकृत गरेर स्वतन्त्र कायम राख्न ऐतिहासिक पात्र चाहिएको थियो, ती पृथ्वीनारायण शाहको रूपमा पैदा भइदिए । इतिहासको आवश्यकताले जुन गुण माग गरेको थियो, त्यो गुण पृथ्वीनारायण भन्ने व्यक्तिमा देखा पर्‍यो र उनले त्यो पूरा गरे ।
अहिले पनि ६० वर्षभन्दा अघिदेखिका आन्दोलनहरूलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएर पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिँदै पुँजीवादको विकास र समाजवादतिर जाने नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ । अब मुख्य रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर तीव्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथ नेपाली समाजलाई आधुनिक युगमा लिएर जाने आवश्यकता छ । त्यसलाई पूर्ति गर्ने पात्र को हुन सक्छ ? यो त आमजनताले नै सामूहिक रूपमा फैसला गर्ने हो । तर, त्यसको नेतृत्व सामूहिक रूपमा कसले गर्छ भन्ने कुराको खोजी भइरहेको छ । हामीमध्येका पात्रहरूबाट पनि हुन सक्छ । नयाँ आउन पनि सक्छन् । इतिहासले त्यसको खोजी गर्छ । अब आवश्यकता र आकस्मिकताको योगफलस्वरूप नेतृत्व जन्मिन्छ ।
नयाँ शक्तिको उदय दुई वा तीन प्रक्रियाबाट हुन सक्छ । पहिलो, यिनै पार्टीहरूले आवश्यकताबोध गरेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने । नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ भने पुरानो विचार, पुरानै पार्टी र पुरानै नेतृत्वबाट यो सम्भव हुँदैन । अर्को बाटो, सबै पार्टीभित्रबाट यो विचारलाई आत्मसात् गर्नेहरू मिलेर नयाँ ध्रुवीकरण हुन पनि सक्छ । अथवा, यो सबै प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले नयाँ नेतृत्व जन्मिन पनि सक्छ ।
नेतृत्व भनेको पाको वा कपाल फुलेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । परिवर्तन गर्ने विश्वका नेताहरू पनि ४० वर्ष आसपासका नै छन् । त्यसरी नै हामीकहाँ पनि त्यही उमेर आसपासका नेताहरू नै आउन सक्छन् । अथवा, पुरानै मध्येबाट कसैले युगको आवाज सुनेर आफूलाई रूपान्तरण गर्न पनि सक्छन् ।
हामी संविधान बनाउने चरणमा छौँ । संविधान मात्रै पनि नभनौँ, नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै छौँ । यस सन्दर्भमा के के कुरामा ध्यान दिने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । त्यसमध्ये प्रमुख कुरा नेपाली राष्ट्रियता हो । यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषय हो । जबसम्म राष्ट्रिय राज्यहरू रहन्छन्, त्यतिबेलासम्म प्रत्येक राष्ट्रिय राज्यले आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । एउटा व्यक्तिले म को हुँ, किन हुँ भनेजस्तै एउटा राज्यले ऊ के हो, किन हो र कसरी हो भन्ने कुराको स्पष्ट पहिचान कायम गर्न सकेन भने त्यो राष्ट्रिय राज्यको अस्तित्व रहँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कहिलेकाहीँ आत्मग्लानि पनि हुन्छ । गौरवशाली इतिहास बोकेको भूखण्डमा जन्मेर पनि यसको गौरवलाई यदाकदा नबुझेजस्तो अनुभूति हुन्छ (हेर्नूस्, गर्विलो इतिहास) । हामीले हाम्रो इतिहासलाई यदाकदा बिर्सेजस्तो, कायम राख्न नसकेजस्तो लाग्छ । त्यसका पछाडि मुख्य कुरा सुगौली सन्धिमा हामीले अंग्रेजसँग हारेपछिका घटनाक्रमहरू जिम्मेवार छन् (हेर्नूस्, सुगौली सन्धिले झुकाएको शिर) ।
करिब दुई सय वर्षदेखिको असमान भारत–नेपाल सम्बन्धले बलियो झन् बलियो बन्दै गयो र हामी झनै कमजोर । दुर्भाग्य के भयो भने नेपालमा १ सय ४ वर्षको राणा शासन र २००७ सालपछि पनि पञ्चायती शासनका नाममा पुरानै राजतन्त्र आदिका कारण हामी आर्थिक रूपमा सामन्तवादको युगलाई परित्याग गरेर औद्योगिक युगमा जान सकेनौँ । यसरी नेपालको राष्ट्रियता झन् कमजोर, कुण्ठित र संकुचित हुँदै गयो ।
अब नेपालको राष्ट्रियता र पहिचानलाई स्थापित गर्न इतिहासलाई स्मरण गर्दै मुलुकलाई अहिलेको युगमा साँच्चिकै स्वाधीन, समृद्ध र सबल बनाएर मात्र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा बलियो र आर्थिक रूपमा सम्पन्न नबनाएसम्म राष्ट्रियता बलियो बन्न सक्दैन । त्यसैले सबभन्दा पहिले हामीले नेपाल भन्ने परिचय स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ (हेर्नूस्, प्रमुख पहिचान नेपाल) ।
यही क्रममा हामीले आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । हामीकहाँ एउटा सुखद सौभाग्य कस्तो थियो भने उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बृहत् सभ्यता थिए । उत्तरमा चिनियाँ सभ्यताको रूपमा एउटा महादेशीय आकारको देश छ र दक्षिणतिर पनि त्यही हैसियतको सभ्यता बोकेको देश । यी दुवैभन्दा हाम्रो इतिहास कुनै पनि अर्थमा सानो थिएन । यिनीहरूकै हाराहारीमा थियौँ र कतिपय अर्थमा बलियो पनि । यी दुवैको लाभ लिएर अगाडि जाने अवसरको सम्भावना हामीलाई थियो तर राजनीतिक कारणले असमान सम्बन्धमा बाधियौँ । र, उत्तरबाट अलिक बढी कट्यौँ । हाम्रो शासन व्यवस्था बढी अन्तरमुखी किसिमको रह्यो । त्यसले गर्दा विश्वमा आएका ठूला परिवर्तनहरू र विज्ञान प्रविधिको विकासको फाइदाबाट पनि हामी विमुख हुन पुग्यौँ ।
अब हामी केही हदसम्म खुला परिवेशमा आयौँ । नयाँ परिवेशमा कतिपयले हाम्रो भू–राजनीतिलाई अभिशापका रूपमा हेर्छन् । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्ने क्रममा अंग्रेज र चिनियाँ राज्यको शक्ति देखेपछि नेपालका लागि दुई ढुंगाको तरुलको विम्ब प्रयोग गरे । दुवैसँग निहुँ नखोजी सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने भाव दिए । यसले बढी अन्तरमुखी भएर बस्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्‍यो । अब २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा भारत पुँजीवादको विकासतिर गयो र चीन समाजवादी र पुँजीवादी आर्थिक विकासको सम्मिश्रणमा अगाडि बढ्यो । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्यो भने भारत दसौँ ठूलो । केही समयपछि भारत पाचौँसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषा पनि ढुंगाबीचको तरुल होइन, दुई ठूला देशबीचको गतिशील पुलको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । दुई ठूला देश र अर्थतन्त्रबीचको गतिशील सेतुका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । यसरी मात्रै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन्छ । र, युग सुहाउँदो समुन्नत ठाउँमा पनि पुगिन्छ । त्यसैले यस पक्षमा ठूलो राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ । पृथ्वीनारायण शाहयता हाम्रो राष्ट्रियतासम्बन्धी जुन ‘न्यारेटिभ’ हो, त्यसलाई पनि युग अनुकूल बदल्नुपर्छ ।
संघीयतामा दुई अतिवाद
नेपाल धेरै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त एउटा इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय राज्य हो । त्यस अर्थमा नेपाल स्वयं एउटा समग्र राष्ट्रिय एकाइ हो भने त्यसभित्र पनि अन्य राष्ट्रियता (नेसनालिटी)हरू छन् । एउटा ‘कम्पोजिट नेसन स्टेट’का रूपमा समग्र नेपाल एउटा विविध जाति, भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र मनोविज्ञानले बनेको छ र त्यसभित्र थुप्रै राष्ट्रियताहरू छन् । ती राष्ट्रियताहरूलाई पनि उनीहरूको पहिचान र स्वायत्तताको अधिकारसहित संयोजन गरेर एकीकृत नेपालको ‘नेसन स्टेट’ निर्माण गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा ‘नेपाल’को आफ्नै मौलिक परिभाषाको आवश्यकता भने छ । यो नहुँदा यसलाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा लिन त खोज्ने तर जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार्न नखोज्ने एउटा पुरानो प्रवृत्तिको भ्रम कायमै रहन सक्छ । भन्न त पृथ्वीनारायण शाहले ‘चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी’ भने तर व्यावहारिक रूपमा नेपालको खस आर्य राष्ट्रको रूपमा मात्रै पहिचान कायम भयो र अरू राष्ट्रियताहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने खालको एकात्मक राष्ट्रियता निर्माण भयो ।
अर्को अतिवादी सोच पनि छ । लामो समयदेखि दमन र भेदभावको सिकार खेप्दै आएका विभिन्न भाषा, जाति, क्षेत्रका ‘नेसनालिटी’हरूले आफूलाई स्वतन्त्र एकाइको रूपमा बुझ्ने र त्यसलाई स्वतन्त्र अलग–अलग राज्य पनि बन्न सक्छ भन्ने । त्यसले देशलाई फेरि विखण्डनतिर लैजाने खतरा रहन्छ ।
नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा लिन त खोज्ने तर जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार्न नखोज्ने पुरानो प्रवृत्ति एकातिर भयो । अर्कोतिर इन्द्रधनुषी नेपाली राष्ट्रिय राज्य र समग्र नेपालीत्वलाई नै बिर्सेर अलग अस्तित्व बनाउन खोजियो । त्यसले आशंका बढायो । जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी डराउनेजस्तो भयो । यस्तो सोचले देशलाई फेरि विखण्डनतिर लैजाने खतरा रहन्छ । यी दुवै प्रवृत्ति न वस्तुवादी छन्, न त मुलुकका निम्ति हितकर ।
संघीयतामा पहिचान र सामथ्र्य दुइटा पक्षलाई समावेश गर्ने भन्नेमा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । बुझाइमा मात्र भिन्नता छ । त्यसलाई पनि धेरै तन्काइराख्नु जरुरी छैन । उत्पीडित जाति र जनजातिहरूको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र अधिकार खोसिएको भएरै संघीयतामा जाने भनिएको हो । अलग–अलग भाषा, जाति र क्षेत्र हुँदैनथ्यो भने त त्यहाँ संघीयता भन्नै पर्दैनथ्यो । संघीयता भनेको खोसिएको पहिचान र अधिकार दिने हो । विशुद्ध सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा मात्रै राज्य बनाइयो भने व्यवहारिक बन्दैन । प्रशासनिक, आर्थिक पूर्वाधारका सम्भावनाका कुरा भएनन् भने त्यसले काम गर्दैन । सोभियत संघजस्तो अलगअलग स्वतन्त्र राज्यका रूपमा रहने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ । त्यसरी नै नेपाल चीन वा अरू देशजस्तो एउटै भाषा, जातिको अत्यधिक बाहुल्य भएको ठाउँ पनि होइन र यहाँ एकात्मक राज्य रहनै सक्दैन । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता र संघीय ढाँचा ऐतिहासिक, जातीय र क्षेत्रीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर परिभाषित गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, हामी दुई ठूला सभ्यतायुक्त भीमकाय मुलुकको बीचमा छौँ । त्यसको ख्याल नगरी संघीय राज्य निर्माणमा गयौँ भने हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर पर्न सक्छ । संघीयता भन्नेबित्तिकै केन्द्रीय अधिकार संघीय राज्यहरूलाई दिने हो । भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने सिमानामा जोडिएका प्रदेशमा बाह्य शक्तिले चलखेल गर्न सक्छन् । त्यसले मुलुकलाई कमजोर र विखण्डनमा पारिदिने खतरा रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई कायम राख्ने गरी अधिकारको विनियोजन गरिनुपर्छ ।
नेपालीत्वको पहिचान विश्वमा कुनै राष्ट्रको भन्दा कम ओजपूर्ण छैन । इतिहास अरू कसैको भन्दा कम समृद्ध छैन । संस्कृति, सभ्यता, विचार र सम्पदामा हामी कसैभन्दा कम छैनौँ । कमी भनेको खालि उचित राज्यप्रणाली, नीति र नेतृत्वको हो । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रियताको मजबुत जगमा उभिनुपर्छ । नेपाली राष्ट्रिय हितमा उभिएको, राष्ट्रियता र इतिहासको आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा त्यसको उदय हुनुपर्छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र
राष्ट्रियता र जनतन्त्रका दुइटा अभिन्न पाटाको सन्तुलन मिलाउन नसक्नु नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूको ठूलो कमजोरी हो । हिजोका राजतन्त्रवादीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा लोकतन्त्रको कुरा बिर्सने र लोकतन्त्रको कुरा गर्नेले राष्ट्रियताको कुरा बिर्सेजस्तो हुने गरेको छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता फरक कुरा होइनन् र हुनै सक्दैनन् । राष्ट्रियताभित्रै लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको जगमा राष्ट्रियता हुन्छ । तर, यसमा गम्भीर बहस र विमर्श पुगेको छैन । यसैमा बाह्य शक्तिले चलखेल गरिदिने र हाम्रा पार्टीहरूको बुझाइमा एकरूपता नआउने कारणले पनि हामी रक्षात्मक हुने गरेका छौँ । आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि भन्नैपर्छ, नेपाली राष्ट्रियता नेपाली इतिहासमा सुगौली सन्धियताकै निरन्तरतामा छ तर पनि यो बलियो भएर आउन सक्नुपथ्र्यो, सकिरहेको छैन । अब हामीले राष्ट्रियताको जगमा टेकेर नै नेपाललाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसरी नै गणतन्त्र सबै जाति, भाषा र क्षेत्रको समान अधिकार भएको प्रणाली हो । अत: गणतन्त्र र राष्ट्रियतालाई एउटै सिक्काका दुई पाटाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्र सबैभन्दा उन्नत र उपयुक्त अवधारणा हो भन्ने आमधारणा छ । तर, अमूर्त ‘लोकतन्त्र’ भनेर मात्र पुग्दैन । त्यसको ठोस र विशिष्ट रूप पनि हुन्छ, जसलाई आफ्नो विशिष्ट प्रकृति र ऐतिहासिक विकासको चरण अनुसार ठम्याउन सक्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा नवउदारवादी लोकतन्त्रका कतिपय पक्षलाई हामीले अँगाल्नैपर्छ । जस्तो कि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासनलगायत लोकतन्त्रका सार्वभौम पक्ष । त्यसभित्रको विशिष्ट पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, जहाँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लंैगिक विविधता समेट्ने गरी समावेशी–समानुपातिक प्रकारको लोकतन्त्रको ढाँचा विकास गर्न सक्नुपर्छ । अमूर्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै भयो भने हिजो विभेदमा परेका विपन्न समूहको राज्यसत्तामा सहभागिता हुनै सक्दैन । उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व रहँदैन ।
युरोप र अमेरिकामा पुँजीवादी लोकतन्त्रको अभ्यास गरियो । खास गरी यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो, त्यसमा जनताका प्रतिनिधि पार्टीहरू र पार्टीको प्रतिनिधि नेताहरू हुन पुगे । व्यवहारमा जनताको अधिकार पार्टीले लिने र पार्टीको अख्तियारी केही नेताहरूले लिने भए । जनताको वास्तविक सहभागिता राज्य सञ्चालनमा हुन सकेन । लोकतन्त्र भनेको त लोकको शासन हो । जनताले आफ्नो शासन आफँै चलाउने प्रणाली हो । तर, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको कडी टुट्यो । त्यसकारण जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विधि पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । र, त्यसका उपाय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, छिटोछिटो निर्वाचन, पार्टीभित्रै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन, प्रत्याह्वानको व्यवस्था, जनलोकपालको व्यवस्थालगायत हुन सक्छन् ।
हाम्रा अधिकांश पार्टीहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । नाम मात्रका लोकतान्त्रिक छन् । पार्टीमा सीमित नेताको एकाधिकार छ । उनीहरू लामो कालसम्म नेतृत्वमा रहन्छन् । उनीहरू त्यो अख्तियारी जनताबाट लिएको हो भन्ने बिर्सेर जन्मजात दैवी शक्तिबाट प्राप्त गरेजस्तो ठान्छन् । पुरानै राजतन्त्रात्मक शैलीले व्यवहार गर्छन् । त्यसले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पक्ष कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न र पार्टीको लोकतन्त्रीकरणलाई पनि संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै ध्यान दिएर जानुपर्छ । निश्चित व्यक्तिहरूले मात्रै पार्टीमा हालीमुहाली गर्ने र पार्टीहरूले जनताको नाउँमा जनताको हितविपरित काम गर्ने परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ ।
नयाँ शक्ति, नयाँ कार्यभार
राजनीतिक रूपमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे पनि आर्थिक रूपमा पुँजीवादका आधारहरू निकै कमजोर छन् । समाजलाई अझै समतामूलक र समृद्ध बनाउन तीव्र आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीसहितको विकास नीति अपनाउनुपर्छ । त्यसैले अब आर्थिक विकास नै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हुन्छ । अबको राजनीतिक एजेन्डा विकासमुखी र अर्थमुखी नबनाई सुखै छैन । त्यसो गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिँदैन । त्यसैले नयाँ शक्तिको मुख्य कार्यभार आर्थिक समृद्धि नै हुनुपर्छ, हुन्छ ।
अब पराश्रयीपनको अन्त्य गरेर मुलुकलाई बढी आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने नै हाम्रो मूल आर्थिक विकास नीति हुनुपर्छ । साथै, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति गर्ने नीति लिनुपर्छ । तीव्र औद्योगिक विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । एकैचोटि आन्तरिक लगानीले पुग्दैन । तत्काल विदेशबाट लिने लगानीलाई ठीक ढंगबाट परिचालन गर्ने नीतिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा परियोजना, ठूला उद्योगधन्दा नभई देश बन्दैन । परम्परागत कृषि, पर्यटनजस्ता कुराहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । तर, त्यसमा विदेशी लगानीकर्ता तुरुन्तै आउँदैनन् । सुरुमा हामीले आफूसँग भएको लगानी परिचालन गरी बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, फेरि पनि कुरामै सीमित हुनेछौँ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा देशलाई आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र राख्ने लक्ष्यका साथ बाह्य पुँजीलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनैपर्छ ।
हामी जुन चरण र युगमा प्रवेश गरेका छौँ, त्यो आर्थिक विकास र समृद्धिको युग हो । अबको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु आर्थिक समृद्धिलाई नै बनाउनुपर्छ । १०–२० वर्षको हाम्रो एजेन्डा भनेको आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने ढंगले अगाडि जानुपर्छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधार निर्माणजस्ता काममा बाह्य पुँजी नल्याई सुखै छैन । त्यसमा पनि जलविद्युतको निर्यात छरछिमेकमा बाहेक अन्यत्र गर्नै सकिन्न । त्यसैले छरछिमेककै पुँजीलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले लिनुपर्छ । बलियो छिमेकीले त कमजोर हामीलाई हेपिराख्छ । उसले हेप्यो भनेर गनगन गरेर बस्नुभन्दा नहेप्ने अवस्थामा कसरी पुग्ने, त्यो दिशामा जानुपर्छ । त्यो नै सच्चा राष्ट्रिय हित हुन्छ ।
माओवादी एउटा पार्टी मात्रै होइन, यो त एउटा विचार हो । आन्दोलन हो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो । संविधानसभामा आकार सानो–ठूलो भए पनि मुख्य कुरा उसको विचार हो, आन्दोलन हो, एजेन्डा हो । नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा हो । त्यसलाई ठीक ढंगले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो संकट एमाओवादीलाई के भएको छ भने आफूले उठाएको एजेन्डा अघि बढाउन सक्ने कि नसक्ने ? नयाँ परिस्थितिमा त्यसलाई परिमार्जित गरेर लैजान सक्ने कि नसक्ने ?
हिजो त हामीले आन्दोलनमुखी राजनीति गरेका थियौँ । त्यसबाट केही महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका थियौँ । तर, अब पुरानो प्रकारको आन्दोलन गरेर हुँदैन । पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिका कार्यभारहरू मोटामोटी पूरा गरेका छौँ । अब आर्थिक क्रान्तिबाट समाजवादी क्रान्तिमा जाने बाटोमा प्रवेश गरेका छौँ । एमाओवादी पार्टीले त्यो भूमिका पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसका निम्ति आफूलाई पुन:निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसमा भर गर्छ । यो नयाँ युग र नयाँ चरणको कार्यभार पूरा गर्न कि त पुरानै राजनीतिक शक्तिले सक्नुपर्‍यो, आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गरेर । उसले सकेन भने नयाँ शक्तिको उदय अनिवार्य छ । नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश गरसिकेको छ । अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जानका निम्ति आफ्नो संगठन, नेतृत्व र कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।
हामी जहाँ चुक्यौँ
हामी माओवादीहरू सबैभन्दा अग्रगामी सोच राख्थ्यौँ र जनताको ठूलो विद्रोहले हामीलाई समर्थन पनि गर्‍यो । नेपाली राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने ठाउँसम्म पुर्‍यायौँ पनि । तर, पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र सन्तुलनलाई ख्याल राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा केही कमजोरी रह्यो । हाम्रो नीति र नेतृत्वमा सन्तुलन रहेन । कहिले असाध्यै झुक्ने, कहिले जड भएर बस्ने र यथार्थ धरातलमा सीधै टेक्न पनि नसक्ने । माओवादी आन्दोलनभित्र एउटा असाध्यै यान्त्रिक र जड प्रवृत्ति रह्यो, परिवर्तन भएर अगाडि जानै नसक्ने । अर्कोतिर खुला परिवेशमा आइसकेपछि क्रान्ति र परिवर्तनका एजेन्डालाई बिर्सेर पूरै लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति । कहिले एउटा ‘एक्स्टि्रम’मा त कहिले अर्को ‘एक्स्टि्रम’मा जाने कारणले पनि हामीले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनौँ । हामीले एउटा अवसर गुमाए पनि समाजमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ, क्रान्ति भइसकेको छ । अरू नै कोही नेतृत्वमा आएछ भने पनि यो परिवर्तन त भयो भयो । यसलाई पछाडि फर्काउन कसैले सक्दैन । ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो । नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको प्रतिगमन सहने पक्षमा कहिल्यै रहेनन् र छैनन् ।
नेता, नैतिकता र राजनीति
राजनीति व्यवसाय होइन । निजी स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम पनि होइन । समाज बदल्न स्वेच्छाले गर्ने कर्म हो । विसं २००७, २०४६ देखि २०६३ सम्मका क्रान्तिका वाहक शक्तिको नेतृत्वमा बिस्तारै आफ्नो स्वयंसेवी चरित्रलाई बिर्सेर राजनीति निजी स्वार्थ र पारिवारिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधन हो भन्ने बुझाइ हावी हुँदै गयो । नेताहरू पारिवारिक स्वार्थमा बढी जकडिने, निजी सम्पत्ति जोड्न र अपारदर्शी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा जोडिने पक्ष देखा पर्‍यो, जुन बडो दु:खद छ । यो विकृत परम्परालाई बदल्न सक्नुपर्छ । यदि नयाँ चरणको राजनीति सुरु गर्ने हो भने राजनीति देश र जनताको निम्ति गरिने स्वयंसेवा हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुपर्छ । जनताप्रति समर्पित दूरदृष्टिसहितको नीतिमा आधारित पार्टी बनाउनुपर्छ । निजी स्वार्थ परित्याग गरेको नैतिकवान् चरत्रिसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै नयाँ चरणको राजनीति विकास गर्न सक्छ । हाम्रो अहिलेको पार्टीको नेतृत्व यसमा कत्तिको खरो उत्रिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने त्यति सकारात्मक र सन्तोषजनकचाहिँ छैन ।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय राज्य हो यो । त्यसभन्दा पहिले जाँदा मानव जातिको उत्पत्ति र विकास यस क्षेत्रमै सबैभन्दा पहिला यही हिमाली भूखण्डमा भएको देखिन्छ । विगतमा यस पहाडी भूखण्डलाई दक्षिण र उत्तरबाट आएका आप्रवासीको थलोका रूपमा मात्रै व्याख्या गरिन्थ्यो । तर, इतिहासका पछिल्ला ज्ञान र अनुसन्धानले त्यसलाई खण्डन गरिरहेका छन् । यसको मूल प्रवृत्ति भनेको यहाँ मानव जातिको सुरुदेखि नै बसोवास भएको भन्ने हो । अफ्रिका र मध्य एसियादेखि सुरु मानव जाति चलायमान हुने बेलादेखि नै यहाँ मानव बसोवास रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालको सभ्यता, इतिहास र संस्कृति नै त्यही बेलादेखि बन्दै आएको देखिन्छ ।
यो आदि प्रागैतिहासिक कुरा हो भने पनि ऐतिहासिक कालखण्डमै यहाँ बुद्धको समयदेखिका सभ्यताका प्रमाण छन् । सबै धार्मिक र अलौकिक कुराहरू विश्वसनीय नहोलान् तर दक्षिण एसियामा भएका धार्मिक परम्परा र कल्पनाहरू पनि त्यत्तिकै हावामा आएका होइनन् । त्यसका पछाडि केही घटना छन्, जसले कालान्तरमा कथा र उपकथाको स्वरूप पाएको हुन सक्छ । हिमाली भेगका शिव–महादेवका चर्चा, साधुसन्तको तपोभूमिका कुरा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथलगायतका साधुसन्तहरू र महात्माहरूको चर्चाले तिनको उत्पत्ति प्रागैतिहासिक कालमा भएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणका प्रमाण बुद्ध, याज्ञवल्क्य र मिथिला सभ्यता हुन् ।
यी तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ, प्रागैतिहासिक कालदेखि नै अत्यन्तै सम्पन्न र समृद्ध क्षेत्र हो नेपाल । पछि अंग्रेजसँग लड्ने क्रममा पूरै दक्षिण एसिया अंग्रेजहरूको कब्जामा पर्दा पनि यो भूखण्डलाई जोगाएर राख्ने काम लडाकू नेपालीले गरे । त्यस अर्थमा नेपालको राष्ट्रिय परम्परा अत्यन्तै गौरवशाली छ ।
सुगौली सन्धिले झुकाएको शिर
पुँजीवादको युग आर्थिक श्रेष्ठतामा मापन हुने युग हो । त्यसअघि त भावनात्मक, सांस्कृतिक आदि सम्बन्धले पनि हुन सक्थ्यो । जमिनमा आधारित उत्पादनको सम्बन्धले त्यत्रो ठूलो अन्तर हुँदैनथ्यो । पुँजीवादको नियमै हो, जससँग धन छ, ऊ झन् धेरै धनी बन्दै जान्छ र गरिब झन् गरिब ।
सन् १८१५/१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा युरोपमा पुँजीवादको विकास हुँदै गरेको थियो । अंग्रेजहरूले दक्षिण एसियामा उपनिवेश मात्र विस्तार गरेनन्, पुँजीवादको विस्तार पनि गरे । कलकत्ता, मद्रास, बम्बईजस्ता औद्योगिक सहरहरू बन्दै गए । तर, नेपाल ब्रिटिस–भारतसँग असमान सम्बन्धमा बाँधिन पुग्यो, जसले गर्दा छिमेकमा झैँ उद्योग र पुँजीवादको विस्तार एवं विकास यहाँ हुन सकेन । आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण भएको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । क्रमश: हामी आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गयौँ । अंग्रेजहरूको नेतृत्वमा भारतमा जसरी पुँजीवादको विकास र विस्तार भयो, तीसँग हाम्रो विनिमय पनि असमान बन्न पुग्यो । र, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध ‘डोमिनेन्स डिपेन्डेन्स’ अर्थात् प्रभुत्व र पराश्रयको जस्तो बन्न पुग्यो ।
जबकि, सुगौली सन्धिभन्दा अघि हाम्रो अवस्था र भारतको अवस्था करिब उस्तै थियो । कतिपय अंग्रेज विद्वानले त्यतिबेला नेपाल आएर लेखेका छन् कि कागज, कपडा, चिनी, फलामलगायत धातुका भाँडा आदि उत्पादन अन्यत्रभन्दा हाम्रो बढी परिष्कृत र परिमार्जित थियो । सुगौली सन्धिअघि हामीले भारतसँग निर्यात गर्ने र आयात गर्ने अनुपात ५:१ थियो । तर, अहिले त्यो अनुपात १:८ भएको छ । हामी कसरी असमान सम्बन्धमा बाधियौँ र उल्टो दिशातिर गयौँ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यसको सोझो असर नेपाली राष्ट्रियतामा पर्न गयो ।
प्रमुख पहिचान : नेपाल
यतिबेला समग्र नेपाली नै पहिचानविहीन भएजस्तो, आफैँ कताकता हराएजस्तो भएको छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी नेपाली हीनताबोधबाट ग्रस्तजस्ता छौँ । सबै नेपाली विदेश पलायन हुन खोजेजस्तो, सबै पढेलेखेकाहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्ेरलिया गएर बस्न पाए खुसी हुनेजस्तो । यहाँ मान्छे सचिव छन्, ठूला ओहोदामा छन् तर उनीहरूका छोराछोरी विदेशको नागरिकता लिएर गर्व गर्ने भइरहेका छन् । किनभने, कसैको पहिचान उसको अस्तित्व र त्यसबाट उत्पन्न आत्मविश्वास हो ।
त्यसपछि मात्र अरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुरा आउँछन् । अहिलेसम्म राजतन्त्रले स्थापित गरेको नेपाल आर्य खस जातिको मात्रै परिचय रहेको नेपाल भयो । उनीहरूको मात्रै भाषा, संस्कृति रहेको देश भन्ने भयो । हिजोको नेपाली राष्ट्रियता राजतन्त्रसँग जोडिन पुग्यो । त्यो राजतन्त्र नरहनेबित्तिकै नेपालको राष्ट्रियता पनि रहेन भनेजसरी प्रचार गरिदिँदा कतिपय नेपालीले आफूलाई पहिचानविहीन पनि ठाने । त्यसको लाभचाहिँ नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भएर विदेशीहरूले लिन सक्छन् ।
भन्न त पृथ्वीनारायण शाहले पनि चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी भने तर व्यवहारिक रूपमा खस आर्य राष्ट्रको रूपमा मात्रै पहिचान कायम भयो । अरू राष्ट्रियताहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने खालको एकात्मक राष्ट्रियता निर्माण भयो । विभिन्न भाषा, जाति र क्षेत्र आफैँमा अलगअलग ‘नेसनालिटी’हरू हुन्, इन्द्रधनुषी र ‘कम्पोजिट’ नेपाली राष्ट्रिय राज्यका अभिन्न ‘बिल्डिङ् ब्लक’ हुन् । अब यी सबै नेसनलिटिजसहितको ‘कम्पोजिट नेसन स्टेट’का रूपमा नेपाललाई परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र नेपाल आन्तरिक रूपमा बलियो हुन्छ । आन्तरिक रूपमा बलियो भइसकेपछि मात्रै बाह्य रूपमा बलियो हुन्छ । राज्यको पुन:संरचना गर्दा नेपाली विशिष्टतासहितको संघीयता भन्नुको तात्पर्य त्यही हो ।